Klivia dia zavamaniry marevaka mahafinaritra. Tsara tarehy toy ny voninkazo izy, ary ny raviny dia - loko, mamy, maitso mavokely. Ny voninkazo dia mamelana indrindra amin'ny volana ririnina, ka miteraka hatsatra sy fampiononana ho an'ny trano, izay tena ilainy mandritra ny volana mangatsiaka.
Ny felam-boninkazo dia mitaky fikarakarana tsara, avy eo dia hanome laka 20 santimetatra mamirapiratra sy goavam-be ao anaty lavaka lava mamirifiry. Amin'ny ankapobeny, ny fikarakarana ny orinasa dia tsy sarotra loatra - tsy tokony ho menatra sy hafenana amin'ny hazavana. Ankoatra izany, mila mametraka fotoana maharitra izy.
Raha tsy mitombo ny mpangalatra
Ny antony manan-danja indrindra amin'ny antony tsy mitombo ny fijanonana dia tsy ampy ny masoandro. Amin'ny fahavaratra dia mila hazavana mamirapiratra ny zavamaniry, ary amin'ny ririnina dia mety hijanona lavitra kely amin'ny atsimo na any atsimo atsimo.
Raha tsy fohy ny voninkazo, tsy maintsy ho tafavoaka velona izy io, nefa tsy azo ovaina intsony. Eny, ary hitombo tsikelikely izany. Inona no tokony hataonao raha mazava tsara ny klioba: mila manome hazavana bebe kokoa ianao.
Ny antony iray hafa ahafahan'ny voninkazo mandany ny voninkazo dia tany mahantra loatra ao anaty vilany. Mila moka matetika ny voninkazo, indrindra mandritra ny vanim-potoana mitombo. Tokony hatao isaky ny 2 herinandro izany, ny dipoavatra organika sy mineraly.
Mba hahafahan'ny fivalozana maniry matetika, dia mila fotoana fialan-tsasatra izy. Raha kely ny zavamaniry dia mila manome azy fiadanana mandritra ny vanim-potoan'ny Septambra-Oktobra. Inona no dikan'ny hoe manome fiadanana ny zavamaniry? Mila entina any amin'ny loggia na balkon-lavarangana misy azy, izay mitazona ny hafanana eo amin'ny 10 ° + eo ho eo, atsaharo ny fandroana, ary ataovy azo antoka fa tsy mihintsana ny ravina. Raha ritra ny raviny ary lavo, dia mety hanamaivana ny tany ianao.
Tamin'ny volana Novambra, nampidirina indray tao anaty efitrano mafana ny zavamaniry, manomboka ny fandroana mahazatra ary manakaiky kokoa ny hazavana. Ny toeram-piompiana tranainy dia azo atao amin'ny hatsiaka mandra-pahatongan'ny fanala voalohany. Ny volana Janoary dia hanomboka hamorona zana-tsipìka ny zavamaniry. Ny famokarana, izay nanomboka tamin'ny volana febroary, dia haharitra iray volana.
Ny aretina dia mahalana vao miteraka ny tsy fahampian'ny voninkazo ao amin'ny fiviliana. Na izany aza, io olana io dia mifandray kokoa amin'ny fikarakarana tsy mendrika ny voninkazo, izay voalaza etsy ambony. Raha ny aretina matetika dia misy fiantraikany amin'ny zavamaniry - ny ankamaroany dia misy fiantraikany amin'ny ravina fa tsy voninkazo.
Raha miala amin'ny mavo ny fanadiovana, dia mety ho vokatry ny fahanterana ara-boajanahary izany, ny tsy fahampian-drano, ny tsy fahampian'ny otrikaretina, ny fiterahana matetika na ny fiovana.
Raha toa ka misy ratra mainty mipoitra eo amin'ny raviny, dia manondro ny fisian'ny areti-mando io - miteraka ny oksizôma. Indraindray ny ravin'ny clivia dia voakasika amin'ny parasy - scabies or mealybugs. Noho ireo dia, ny ravina dia manazava sy malazo. Ny parasy dia nesorina tamin'ny fomba mahazatra amin'ny savony sy ny fisotroana tafahoatra na ny kerosena. Raha tapahina ny aretina, dia ilaina ny fitsaboana amin'ny bibikely.
Rasalama - fitandremana taorian'ny fijinjana
Ahoana ny fomba hanamboaram-bozaka acorn?
Barbaris Tunberg - fambolena sy fiahiana
Asters - mitombo avy amin'ny voa, rehefa mamboly ketsa, toro-hevitra amin'ny fambolena mety
Toy ny hazo iray izay nalazo haingana be?
Ny voankazo papaya - tsiambaratelo mitombo ao an-trano
Mifangaro ny rongony "Madonna"
Whitefly - fepetra miady
Tulle ho an'ny efitranon'ny ankizy
Ahoana ny fomba hampivelarana telekinesis?
Rob Kardashian dia nihaona tamin'ny "kopia mampalahelo" an'i Black China
Tsara sy mora - hevitra ho an'ny fitsaboana haingana
Karazana biraon'ny vehivavy
Inona no hanomezana renibeny mandritra ny 75 taona?
Tendrendrin'i Stallone dia ny zanany vavy telo ihany!
Fizarana - fikarakarana any an-trano
Sakafo hafahafa ho an'ny ankizy
Ny Tilikambon'ny Rose
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fako ao anaty vilany?
Trampoline ho an'ny ankizy
Ashley Graham dia nizara tifitra iray nisy hazakazaka maraina teo amoron-dranomasina